Iji Social Media na-eto eto gị Omume ọzọ | Martech Zone
Iji Social Media na-eto eto gị Next Omume
Wednesday, April 11, 2012 Sọnde, Septemba 30, 2012 Eric Olson
Mgbe ọ na-abịa mgbasa ozi mgbasa ozi na ahịa ihe omume, ihe omumu bu: bido iji ya UGBU A - mana gbalịa hụ na ị na-ege ntị tupu ịwụli elu. Ndị ọrụ mgbasa ozi karịrị ndị ọrụ email karịa ụwa niile afọ atọ gara aga na netwọkụ mmekọrịta na-eme atụmatụ ka ọ na-eto. Chee echiche nke mgbasa ozi mmekọrịta dịka ọwa nkwukọrịta karịrị ngwa nkwado ma ọ bụ ndochi mgbasa ozi. Otu-na-ọtụtụ nkwukọrịta nyiwe bụ obere na-erughị irè. Ya mere ọganiihu n ’ụwa dijitalụ nke oge a chọrọ ndị na-ahazi ihe omume ịhapụ obere ma kwado nkwukọrịta“ ọtụtụ-na-ọtụtụ ”.
Tupu imechie taabụ a iji melite akaụntụ Twitter gị, ka anyị tụlee usoro anọ maka iji atụmatụ mgbasa ozi na-aga nke ọma maka mmemme gị.
Chọpụta - Nzọụkwụ mbụ bụ ịmata ndị na-ege gị ntị ịchọrọ. Chọta obodo dị na ntanetị ma na-eche maka ihe kpatara gị. Enwere ike ime nke a site na ụzọ dị iche iche ma ọ bụ nyocha ndị bịara, na-akparịta ụka na ntanetị, ma ọ bụ ịmalite otu na LinkedIn. Uzo obula ichoro, o di nkpa ileba anya netiti ndi mmadu dika ndi otu ndi nnọchi anya obodo, ya mere jidesie ha ike na ntanetị.
Listen - Nkwanye ugwu na ntanetị dị ka ụkpụrụ omume oriri na nkwanye ugwu, ị gaghị agakwuru otu ndị ma bido ịkatọ gị ihe ị na-ekwu. Ọ dị mkpa ka ị buru ụzọ gee ntị, ghọta ihe masịrị ha, wee gosi na ị na-ege ntị site na ịmegharị ọdịnaya mmemme gị ka ọ dabaa na mkpa na mkpa nke ndị bịara gị. Kekọrịta ọdịnaya iji mepụta mkpọtụ na nkata gburugburu ihe omume gị dị irè ma ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, yabụ na-ege ntị mgbe niile tupu izipu.
plan - Nke a bụ nzọụkwụ abụọ nke metụtara ọdịnaya na ikpo okwu.
Ọdịnaya: Gbanwee usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị na ihe mgbaru ọsọ gị ma ọ bụ nke afọ. Inwe ebumnuche doro anya iji depụta usoro ga-enyere gị aka ịtụle mbọ gị nke ọma ma melite njikọ gị. Atụmatụ a ga-enye gị nkọwa doro anya banyere ebumnuche gị dị ogologo oge iji mee ndị bịara ihe omume otu afọ na ọdịnaya iji mee nke a.
Platform: Ozugbo ị nwere atụmatụ ọdịnaya ebe, jide n'aka na ị nwere usoro ikpo okwu maka ndị folks itinye aka na ya. Enwere nyiwe enwere ike dịka LinkedIn ma ọ bụ Twitter mana enwekwara ebe a na-akwụ ụgwọ dị ka ndị nwere onwe ha, obodo ndị nọgidesiri ike ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ na-elekwasị anya n'ihe omume iji dọrọ na mkpokọta ọrụ sitere na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche ma jikọta ya na ọdịmma na ozi sitere na ihe omume ahụ .
Hapụ - Eziokwu siri ike bụ na ndị bịara gị tụkwasara ndị ọgbọ ha obi karịa ka ha tụkwasịrị nzukọ gị obi. Nabata na ịhapụ ịchịkwa mkparịta ụka mmemme bụ ihe dị mma. Tupu, na saịtị, na biputere ihe omume na mgbasa ozi ọha na eze bụ ka a na-etinye aka na njikọ aka ndị mmadụ na-achịkwa. Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ ịmepụta ndị nnọchiteanya na-anụ ọkụ n'obi banyere nzukọ gị, ma jiri ihe ịchọrọ ka ha kesaa ha. Mgbe ahụ, nye ha nnwere onwe ị ga-agwa netwọk ahụ. Nke a pụtara na ị ga-agbasi mbọ ike iji hụ na ọdịnaya niile ị na-ekesa na ndị otu na-elekọta mmadụ nwere ike ịkọwapụta nke ọma. Ọ bụrụ na eme nke ọma, ụsụụ ndị nkwusa ozi ọma a nwere ike ịchụpụ ndị bịara karịa mkpọsa mgbasa ozi ọ bụla.
Ihe omume bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ohere iji jikọta ya na ndị nwere ụdị echiche ma kwurịta isiokwu ndị nwere mmasị, dịkwa ka mgbasa ozi mmekọrịta, nke na-eme ka ọ bụrụ ndọtị zuru oke nke mmemme. Soro usoro ndị a ma ị nwere ike iwulite obodo gị gburugburu ihe omume gị yana nzukọ gị. N'ihi ya, mmetụta nke ihe omume gị ga-agafe karịa mgbidi nke ụlọ nzukọ na nsonaazụ na-akpata atụmanya nwere mmasị ga-abanye n'oche nke ihe omume gị ọzọ.
Tags: mmemme nkwaliteahịa omume nkwankwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Eric Olson bụ onye isi njikwa nke SMB Ihe na Ọrụ Network, Ngwọta Azụmaahịa. Ọ bụ ya na-anya maka ịkwanye atụmatụ ụwa na P&L maka ihe omume azụmaahịa azụmahịa nke ụlọ ọrụ na-enyere obere ụlọ ọrụ azụmaahịa, mkpakọrịta na azụmaahịa na ụlọ ọrụ ngosi aka. Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Mahadum nke Colorado ma na-arụsi ọrụ ike site na ịme ski na isonye na triathlons.
Email Akwụkwọ Akụkọ Monetization: Abụọ Nhọrọ Nhọrọ maka ndị na-ede blọgụ na ndị na-ebi akwụkwọ nta